Lahatsary vaovao ahitàna taratra ny anton’ireo fanafihana any avaratr’i Môzambika · Global Voices teny Malagasy
Tsy mbola fantatra tanteraka izay antony manetsika ireo fanafihana
Voadika ny 29 Avrily 2020 3:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Italiano, عربي, Ελληνικά, Português
Miaramila ao amin'ny tafika Môzambikàna. Sary an'i Steve Evans, CC-BY 2.0
(Mitondra mankany aminà pejy amin'ny fiteny portiogey daholo ny rohy raha tsy misy fanamarihana manokana)
Efa ho taona roa mahery, niatrika fanafihana ataon'ny andian'olona tsy fantatra mitam-piadiana ny faritanin'i Cabo Delgado ao Môzambika. Mihoatra ny 900 ny olona namoy ny ainy hatramin'ny nanombohan'ny fanafihana, araka ny voalazan'ny tetikasa “Armed Conflict Location and Event Data (ACLED)”.
Tamin'ny Febroary, namoaka tatitra iray ny governemantam-paritra ao Cabo Delgado fa mihoatra ny 150.000 ireo olona maritra ilay fifandonana. Tamin'ny faramparan'ny Martsa sy ny fiandohan'ny Aprily no nitranga ireo fanafihana farany ary, taorian'ny iray tamin'izy ireny, nibodo nandritra ny fotoana fohy ny distrika iray ireo mpanafika.
Raha mbola mitoetra ho tsy fantatra izay antony manosika ilay vondrona — na dia antsoin'ny mponina ao an-toerana hoe “Al Shabab” aza ilay izy, tsy fantatra na misy fifandraisany amin'ny vondrona Al Shabaab ao Sômalia na tsia — lahatsary iray nivoaka tamin'ny 7 Aprily no toa manome famantarana vitsivitsy.
Araka ny ambaran'ny Voice of America (VOA), ahitàna taratra ny fanovàn'ilay vondrona ny tetikadiny ilay lahatsary, amin'ny toa fitadiavana fanohanana avy amin'ireo mponina eny an-toerana.
Notaterin'ny VOA fa ireto no teny voalaza tao anatin'ilay lahatsary:
Tadiavinay ny hanajàna ny lalàna islamika. Anay i Cado Delgado ary dia tsy maintsy ho apetrakay ny fanjakàna islamika, okay?
In-droa izahay no tonga teto, ary amin'ity indray mitoraka ity, araka ny hitanareo rehetra, tsy namono na iza na iza izahay na nanimba zavatra, ary ho avelanay hiaina am-pilaminana ianareo
Raha manohy miaraka miasa amin'ny governemana ka mitoroka anay ianareo ary tsy manaraka ny Islamo, hiverina fanintelony izahay ary hodoranay ny zavatra rehetra, hamono olona izahay ary ho ataonay fongana ity (toerana ity), okay?
Andro vitsy taorian'ny namoahana ilay lahatsary, namotika fiangonana katôlika iray tao amin'ny faritra ireo mpanafika. Avy eo ny Papa Fransoà nangataka tsodrano ho an'ireo vahoaka ao Cabo Delgado:
Ny tao anatin'ny fiangonana katôlika ao #Nangololo, ao amin'ny distrikan'i Muidumbe, ny Alakamisy, norobain'ireo #mpanao an-tendro mahery setra efa nampihorohoro ireo vondrom-piarahamonina, no sady nikendry ireo tobin-tafika, efa ho roa taona izao, tao #CaboDelgado, avaratr'i Môzambika. @CDD_Moz @TamukaKagoro77 @zenaidamz pic.twitter.com/hxdymq7evT
— Prof. Adriano Nuvunga, Ph.D. (@adriano_nuvunga) 11 Aprily 2020
Tamin'ny faramparan'ny Martsa, nivezivezy be teny anivon'ny media sôsialy ireo saripika ahitana ilay vondrona milanja ny sainan'ny fanjakàna islamika, toy ny any anaty biraom-pitantanana ao amin'ny vohitr'i Quissanga (nezahan'ny Global Voices ny nanamarina ny daty sy ny tompon'ny sary saingy tsy fantatra):
Talvez aceitarmos logo de uma vez que o Estado Islâmico está em #Mocambique. pic.twitter.com/Tq943at1J5
Nilaza ny governemanta foibe fa tsy maintsy atsahatra ireny fanafihana ireny ary hosamborina sy hosaziana ireo nanao izany:
Manameloka tanteraka ireny fanafihana feno fankahalàna sy mahery setra ireny ny governemanta ary hanohy hanenjika ireo rehetra mpamono, hitondra azy ireny hiatrika ny fitsaràna.
Toy ireo fanafihana ihany, misy ireo tatitra milaza fanjavonana mpanao gazety. Ny akaiky indrindra tamin'ny fanjavonana dia ny an'ilay mpanolotra fandaharana ao amin'ny fampielezampeo, ny RFI amin'ny fiteny portiogey no nitatitra hoe:
Raha ny fampahafantarana avy amin'ny MISA-Môzambika, niala ny tranony tamin'ny 3:00 tolakandro handeha ho any amin'ny fampielezampeo i Ibraimo Mbaruco tamin'ny 7 Aprily, toerana niasàny hatramin'ny 6:00 hariva tamin'io andro io. Voalaza fa nisy naka an-kery ilay mpanao gazety rehefa hiverina hody, teo anelanelan'ny tamin'ny 6:00 sy 7:00 hariva.
Nolazain'ny MISA-Môzambika ihany koa fa fotoana vitsy nialoha an'izay dia nandefa SMS ho an'ny namana iray mpiaramiasa aminy i Ibraimo Mbaruco, nilaza fa feno miaramila manodidina azy. Taorian'izay dia tsy namaly antso intsony izy, na dia mbola velona tao anaty tambajotra ihany aza ny findainy
Ao anaty tatitra iray nivoaka tamin'ny 13 Aprily, avy amin'ny “Institute of Economic and Social Studies (IESE)”, milaza ilay mpikaroka, Sérgio Chichava, fa ny zavatra rehetra dia manondro hoe miatrika vondrona islamika iray radikaly ny firenena, vondrona izay mikendry ny hampihatra ny lalàna islamika.
Hatreto, ilàna fikarohana betsaka ny fahatakarana ireo fiovàna nolalovan'ilay vondrona tato anatin'ny taona roa sy tapany mahery, ary ireo antony mahatonga azy misafidy ny fomba miaramila mba hanatrarany ny tanjony, taorian'ny nilazany hetsika tsy misy herisetra tany am-boalohany.
Iza ilay “fahavalo” mamely an'i Cabo Delgado? Ny akaiky indrindra #IDeIASn_127 an'i @schichava, no manolotra tombana samihafan'ny governemanta môzambikàna momba ny maripamantarana sy ny tanjon'ilay vondrona izay, hatramin'ny 5 Oktôbra 2017 no nanafika ilay faritàny. Vako eto.
Tsy ela akory izay, namoaka hira iray amin'ireo fiteny ao an-toerana ny vondrona artista ao an-toerana, hiantsoana ireo mpanafika ilay faritàny mba hampitsahatra izany:
Hira voalohany reko manameloka ireo fanafihana ao #CaboDelgado. Tarika avy any Mueda ary mihira amin'ny fiteny Maconde, Swahili sy Portiogey.
Maninona izy ireo no mamono anay, mitetika anay toy ny akoho,
Maninona izy ireo no mamono anay, maninona izy ireo no manao ratsy aminay
Fa nanao inona izahay?!
Ny “Centre for Democracy and Development (CDD)” – ivontoerana ho an'ny demaokrasia sy ny fampandrosoana- dia nanipika hoe raha tsy vita ny hifehy ilay toedraharaha, mety hisy olana goavana hipoaka ao amin'ny faritra atsimon'i Afrika manontolo::
Ilaina maika ny hidiran'ny SADC (Southern African Development Community), marina fa ny SADC no ilay andry iray fantatsika rehetra, tsy hay be ihany, saingy mila mihetsika mirotsaka an-tsehatra izy eto.